ukusimama-HC Ukupakisha i-Asia
Kuwo wonke umsebenzi wethu, nakuwo wonke ama-supply chain, siyaqhubeka nokwenza amagxathu amakhulu ekunciphiseni umkhondo wethu wezemvelo. Isu lethu lakhele kuleyo nqubekelaphambili, sibeke amazinga aphakeme kakhulu okunciphisa ukukhishwa kwamagesi abamba ukushisa, ukunciphisa imfucuza nokusetshenziswa kwamanzi, nokuthola izinto zethu ngendlela elungile nenesizotha.
1.ukuqinisekisa ukusebenzisa izinto eziqinisekisiwe eziyi-100% ze-FSC ukunciphisa umonakalo wezwe lethu lomama.
Ukupakisha okungu-2.100% okungenazibuthe, akukho nqubo, nokufakwa kwepulasitiki kwephepha. Ukupakisha kwethu kungaphinde kusetshenziswe kabusha ebangeni nje.
3.Ngokuphikisana no-inki wendabuko kaphethiloli, inki esekwe kusoya kuthathwa njengokufanele imvelo kakhulu, ingahlinzeka ngemibala enembe kakhudlwana, futhi yenze kube lula ukwenza kabusha iphepha.
I-HC Packaging iyaziqhenya ngamasiko ayo okusebenza nokuzibophezela kwethu ekuqinisekiseni ukudlidliza kwemiphakathi lapho thina namakhasimende ethu sihlala futhi sisebenza khona, nalapho imikhiqizo yethu yenziwa khona. Sikhonza leyo miphakathi ngezinhlelo zokunika amandla, iminikelo yezezimali neyemikhiqizo, nangokuzinikela, ukwenza umthelela omuhle emphakathini.
Ngo-2020, amavolontiya we-HC Packaging anikele ngaphezu kwamahora ayi-1,000 XNUMX kuzimbangela zendawo, kusukela ekunikezeni ukudla kwabadala, ukuxhaswa kwezezimali ezikoleni ezimbili zaseHunan, eChina, ukupakisha nokunikela ngezincwadi kubafundi abaswele, nokunye okuningi.
I-copyright © 2021 - 2026 Ukupakisha kwe-HC.
Faka: O 9B, Lo Cn15, Duong So 4 Kcn Song Than 3 P Phu Tan, TP Thu Dau Mot Tinh Binh Duong, Vietnam
Ucingo: 0084 （274） 3899355